တင်းမာမှုမြင့်တက်နေစဉ် အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်ဆက်ရှိနေမည်ဟု ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြော - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
“အီရန်မှခြိမ်းခြောက်မှု” ကြောင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ ပင်လယ်ပြင်တွင် အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Nimitz အား ဆက်လက်ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းစစ်သင်္ဘောကြီး နေရပ်ပြန်ရန် အစောပိုင်းက ထုတ်ပြန်ထားသည့်အမိန့်အား ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်း ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်က ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် နှောင်းပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေကို အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မကြာသေးခင်က ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့် ၊ USS Nimitz စစ်သင်္ဘောကို အဲဒီမှာပဲ ပြန်ပြီး တပ်စွဲထားဖို့ ကျွန်တော်အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ USS Nimitz သင်္ဘောကြီးဟာ အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းတိုင်းဒေသ စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေမှာပဲ အခုအခါ ဆက်ပြီးတည်ရှိနေမှာပါ ” ဟု အမေရိကန်ယာယီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးChris Miller က ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယင်းကြေညာချက်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ ၁၀ လနီးပါးကြာ တပ်စွဲထားမှုအား အဆုံးသတ်ပြီး နေရပ်သို့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးပြန်လာရန် ၎င်းက အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် သုံးရက်အကြာမှာပင် ယင်းအမိန့်အား Miller က ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အီရန်နိုင်ငံထိပ်တန်းတပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် Qassem Soleimani အား အမေရိကန်နိုင်ငံက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ပြည့် အခါသမယတွင် ယင်းနောက်ဆုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်မှု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အီရန်တပ်မှူးအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့၌ အမေရိကန်က မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းဖြင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ယင်းကြောင့်ပင် အီရန် နှင့် အမေရိကန်အကြား ဒေသတွင်းပဋိပက္ခတင်းမာမှုအရှိန်အဟုန်ကို မြင့်တက်စေခဲ့သည်။
ထိုသို့ တစ်နှစ်ကြာ အမေရိကန် နှင့် အီရန် အကြားတင်းမာမှုသည် ပြီးခဲ့သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်က အီရတ်နိုင်ငံဘဂ္ဂဒတ်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး ဒုံးကျည်တစ်စင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တွင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်စကားလုံးစစ်ပွဲအသွင်အဖြစ် ပိုမိုပြင်းထန်စေခဲ့သည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် သမ္မတထရမ့်က အီရန်နိုင်ငံအား ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယင်းစွပ်စွဲချက်ကို အခြားတစ်ဖက်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။အမေရိကန်စစ်တပ်က စစ်အင်အားပြသမှုတစ်ခုအနေဖြင့် B-52H မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကျဲလေယာဉ်နှစ်စင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ယင်းဒေသသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။
“ အမေရိကန်မှာ COVID ကို တိုက်ဖျက်ရမယ့်အစား ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ B52s လေယာဉ်တွေ ပျံသန်းဖို့ နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ဒေသကို စစ်သင်္ဘောတွေစေလွှတ်ဖို့ ဒေါ်လာ ဘီလီယံချီငွေထိုင်ဖြုန်းနေတယ် ” ဟု အီရန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mohammad Javad Zarif ကတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ “ အီရန်ဟာ စစ်ဖြစ်ဖို့ အားမထုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူ့နိုင်ငံသား ၊ သူ့လုံခြုံရေး နဲ့ အရေးပါတဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေအတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ကာကွယ်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
U.S. aircraft carrier to remain in Middle East amid tension: Pentagon
WASHINGTON, Jan.4(Xinhua) — The Pentagon said late Sunday that U.S. aircraft carrier USS Nimitz would remain in the Middle East waters due to “threats from Iran,” reversingaprevious decision to order the warship back home.
“Due to the recent threats issued by Iranian leaders against President (Donald) Trump and other U.S. government officials, I have ordered the USS Nimitz to halt its routine redeployment. The USS Nimitz will now remain on station in the U.S. Central Command area of operations. No one should doubt the resolve of the United States of America,” Acting Defense Secretary Chris Miller said inastatement.
The statement was contrary toadecision made by Miller just three days ago, in which he ordered the aircraft carrier to transit directly home to completeanearly 10-month deployment.
The latest move also came as the first anniversary of the U.S. assassination of Iranian top military commander Qassem Soleimani. The U.S. drone strike on Jan. 3, 2020 in Iraq’s capital Baghdad almost triggered an escalated regional conflict between Iran and the United States.
The year-long tensions were reignited recently as Washington and Tehran were escalatingawar of words overarocket attack targeting the U.S. Embassy compound in Baghdad on Dec. 20.
President Trump blamed the attack on Iran, and the latter denied the allegation. The U.S. military on Wednesday sent two B-52H strategic bombers to the region asashow of force.
“Instead of fighting Covid in US, @realDonaldTrump & cohorts waste billions to fly B52s & send armadas to OUR region,” Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif tweeted in response. “Iran doesn’t seek war but will OPENLY & DIRECTLY defend its people, security & vital interests.”
Photos caption (1) – USS Nimitz aircraft carrie DEPLOYED IN MIDDLE EAST WASTERS.
ထရမ့်ထောက်ခံသူများ အမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုဝင်စီး ၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲရေတွက်မှု ရပ်တန့်ရန် အတင်းအကျပ် တောင်းဆို